Gana fingotra amin’ny hetsi-panoherana thailandey mampisy firaisankina sy sary-sy-soratra · Global Voices teny Malagasy
Gana fingotra amin'ny hetsi-panoherana thailandey mampisy firaisankina sy sary-sy-soratra
Ankalazain'ny mpikatroka #MilkTeaAlliance manerana an'i Azia ny ikônin'ny hetsika ao Thailandy
Voadika ny 03 Desambra 2020 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, srpski, Français, English
Gana fingotra tsy mety rendrika nentin'ny mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny barazy fihaonan-dalan'i Kiak Kai nentina nanaovana ampinga amin'ny tifitra tafondron-drano. Saripika avy amin'i Prachatai, mpiara-miombona antoka amin'ny Global Voices
Lasa zava-tandrovina vaovao ao amin'ny hetsika ho amin'ny demaokrasia thailandey indray ankehitriny ny gana fingotra raha nampiasa azy ireny ho ampinga fiarovana amin'ny tifitra tafondron-drano nalefan'ny polisy ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny 17 novambra. Mbola nampiasaina indray ny gana fingotra ny ampitso nandritra ny fivoriana manameloka ny herisetran'ny polisy.
Nalaza haingana dia haingana ny sarin'ireo gana fingotra voafendraka tsora miloko volomparasy avy amin'ny rano nampiasaina tamin'ny tafondro, niteraka sary-sy-soratra (memes) sy hafatra firaisankina avy amin'ny mpikatroka, artista ary mpisera aterineto ao Thailandy sy any Hong Kong sy Taiwan ihany koa.
Nomanina ny fivoriana tamin'ny 17 novambra teo akaikin'ny parlemanta hanosehana ho amin'ny fanitsiana ara-dalampanorenana, izay iray amin'ny fitakian'ny hetsika tarihan'ny tanora. Ny fitakiana roa hafa indray dia ahitana ny volavolan-kevitra hisian'ny fanitsiana amin'ny fitondram-panjaka sy ny famaranana ny fanenjehana ireo mpitsikera ny governemanta tohanan'ny miaramila.
VAKIO IHANY KOA: Nahoana no manao fihetsiketsehana ny tanora ao Thailandy? [mg]
Prachatai, tranokalam-baovao iray tsy miankina ary mpiara-miasa amin'ny Global Voices ara-botoaty, nanome fanazavana tamin'ny fomba nahatongavan'ireo ganagana ho ‘maherifo’ tamin'ny 17 Novambra
Tamin'ny 16.00, teny amin'ny lalana Samsen, manoloana ny Boon Rawd Brewery Co, Ltd, notifirin'ny polisy tamin'ny tafondron-drano sy baomba mandatsa-dranomaso ireo mpanao fihetsiketsehana, raha nitondra ganagana maro abontsina, izay nantsoina hoe “tafika an-dranomasina” sy natao ho fanesoana ny governemanta, ny mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny fihaonan-dalan'ny Kiak Kai. Nampiasaina ireo ho ampinga miaro amin'ny tafondro rano.
Nanoratra ho an'ny Thai Enquirer, nitantara ny zava-nitranga tamin'io andro io ihany koa i Jasmine Chia:
Goavana, mavo, abontsina, natosika ho any aloha ireo gana fingotra ary nanandrina tafondron-drano. Vitsy no mahalala hoe avy aiza izy ireo. Saingy nanatri-maso ny herim-pon'ireny ny rehetra: mpanao fihetsiketsehana, nisarona akanjo aro orana plastika miloko maitso, niafina tao ambadiky ny ganagana isaky ny nisy tsora simika namely ireo mpanao fihetsiketsehana. Taorian'izay dia niparitaka tamin'ny gazety ny sary:ganagana fingotra, miha-kely (vaky), nisy tasy loko volomparasy saingy mbola mitsiky ihany.
Fihetsiketsehana ao Thailandy – Ganagana fingotra maro manohitra ireo tafondron-drano
Nanoratra ny antony nitondran'ireo mpanao fihetsiketsehana ny ganagana fingotra tany amin'ny hetsi-panoherana ihany koa i Jasmine Chia:
Ny sarin'ny manampahefana Thailandey, nirongo fitaovam-piadiana sy ampinga, mifanandrina amin'ny…ganagana fingotra… manasongadina ny tsy fitoviana eo amin'ny mpanohitra sy ny fanjakana.
Amin'ny lafiny maro, ny ganagana mavo dia maneho izay tena sahy amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sasany amin'izao fotoana: mampirotsaka ireo manana ny hery ry zareo fa tsy misy hery.
Nampiasaina indray ny ganagana nandritra ny fihetsiketseham-pahatafintohinana ny 18 Novambra:
Mila jerentsika izay anjara asan'ireto gana ireto anio. Tamin'ny fihetsiketsehana omaly dia nampiasain'ireo mpanao fihetsiketsehana lohalaharana ho ampinga hanoherana ny tafondron-drano sy ireo toraka ataon'ireo mpanandratra ny mpanjaka manohitra ny mpanao fihetsiketsehana ireo. # ม็อบ 18 พ ฤ ศ จิ กา #Thailand #KE #WhatsHappeninglnThailand pic.twitter.com/7FCXEr2iCI
Mailaka ny artista sy ny mpisera aterineto hankalaza ny fisandratan'ny gana fingotra ho zava-tandrovin'ny hetsi-panoherana:
Miangavy modia am-pilaminana. Ho lava ny tolona ary tsy hihemotra isika.
Indro ny fanazavana ny gana fingotra ho aro ho an'ny tanora mpikatroka:
— bitch ❤🌑🌚💭🏁 (@wayu3738) November 17, 2020
Asongadin'ity endrika tantara an-tsary Star Wars politika ity ny fihaikàn'ny gana fingotra ny “ampiran'ny miaramila”:
Firaisankina avy amin'ny #MilkTeaAlliance
Misy ireo paositra firaisankina ifampizaran'ireo mpanohana ny Fiarahana Ronono Dite (Milk Tea Alliance), tambajotran'ny mpikatroka ho amin'ny demaokrasia avy ao Thailandy, Hong Kong ary Taiwan tsy ara-drafitra.
Midera ny fahasahian'ireo Thailandey mpikatroka sy ny fahaiza-mamorona nampiasa ny gana fingotra ilay tanora mpikatroka manana ny lazany avy ao Hong Kong antsoina hoe Joshua Wong:
Ankoatra ny herisetran'ny polisy, tokony itodihan'izao tontolo izao ihany koa ny fahaiza-mamorona ananan'ireo Thailandey mpanao fihetsiketsehana. Ity angamba ny toerana voalohany ampiasan'ireo olom-pirenena tsy manana ny hery sy tanjaka ny gana fingotra hiadiana amin'ny tsirefesimandidy.
Mandresy ny fahaiza-mamorona.
Ho ela velona ny gana fingotra.
Mpikatroka iray hafa avy ao Hong Kong nanao ity zavakanto nakana aingam-panahy avy amin'i Hokusai ity, izay manasongadina ireo gana fingotra misosa amin'ny ‘onja goavana':
Apetrako eto ity ho fanomezam-boninahitra ireo namana Thailandey noho ny adin-dry zareo hisian'ny fahafahana sy ny demaokrasia.
Artista shinoa sady mpikatroka monina ao Aostralia antsoina hoe Badiucao namoaka ireto sioka ireto ho fanohanana ny Thailandey mpanao fihetsiketsehana:
Amin'ny gana fingotra, matoky izahay!
Fahaiza-manohana ny fiarahana amin'ny demaokrasia
Tandrovy ny ady tsara ary mba tsy hisy haninona ny rehetra.
1 ) Fahaiza-manohana ny hetsika fanohanana ny demaokrasia ao Thailandy.
Nampiasain'ny tanora mpianatra manao fihetsiketsehana ireo gana fingotra goavana hiarovan-dry zareo ny tenan-dry zareo amin'ny fanafihan'ny polisy amin'ny tafondron-drano. Izany no mahatonga ny kisoritsoritra.
Ary farany, misy laonam-piraisankina notontosain'ny mpikatroka ao Taiwan:
Mitranga ao Taiwan amin'izao fotoana izao, eo anoloan'ny Ôfisin'ny Varotra sy Toekarena Thailandy, ny lanonam-piraisankina ho fanohanana ny Thailandey.